IDOZI PLAYSTATION 'E NJEHIE EMEELA' NA BANYE - ADỤ
Idozi PlayStation Mperi Emeela na Nbanye
Mperi Koodu bu ihe ojoo pesky, mana enweghi koodu mperi obula nwere ike buru uzo kari iwe. Ọ dị nfe dị mfe iji dozie nsogbu ị natara ma na njikwa gị ma ọ bụ na ngwaọrụ ndị ọzọ site na nyocha weebụ dị mfe nke koodu njehie. Mana na nke a, enyereghị onye ọrụ ọtụtụ ozi gbasara njehie ahụ.
Njehie a na - enweghị aha nwere ike bụrụ ihe na - abịakarị na kọntaktị PlayStation 4 gị ka ọ na - enweta ozi dị egwu. Emehiela na ọ dịghị ozi ọzọ. Njehie a na - apụtakarị mgbe ị na - ebido PS4 ma ọ bụ na - achọ ịbanye na profaịlụ PSN gị. Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike igosi mgbe ị na-agbanwe ntọala akaụntụ gị, mana ọ dị obere n'oge egwuregwu.
egwuregwu windo windo windo 10
N'isiokwu a, anyị ga-agafe ọtụtụ ụzọ iji dozie njehie PlayStation na enweghị koodu njehie.
Etu esi edozi nsogbu PlayStation emehiere (enweghị koodu njehie)?
Usoro 1: Nyochaa ma melite Ozi Akaụntụ PSN gị
Usoro 2: Mee akaụntụ PSN ọhụrụ site na iji adreesị ozi-e ọhụrụ
Usoro 3: Banye na akaụntụ gị site na njikwa dị iche
Method 4: Gbanwee nzuzo gị Setting to ‘No One’
Usoro 5: Gbanwee ngalaba Aha Sistem (DNS) gị
Usoro 6: Kwupu ụdọ ike
Usoro 7: Kwado ma ọ bụ megharia nyocha nkwenye abụọ
Agbanyeghị na njehie a dị ka nke edoghị anya na edoghị anya, enwere ụzọ ole na ole doro anya ma dị mfe iji mee ka ọ pụọ. Tweaking ntọala akaụntụ PSN gị ga-eme ihe aghụghọ maka ọtụtụ ebe ndị ọzọ nwere ike ịnwale iji akaụntụ ha na njikwa dị iche. Naanị iwepụ eriri USB ma ọ bụ gbanwee ntọala DNS bụkwa azịza nwere ike. Eachzọ ọ bụla a kpọtụrụ aha n'okpuru dị mfe ma dịkwa ngwa, yabụ ị nwere ike ịlaghachi n'ịkpọ egwuregwu kachasị amasị gị.
Neti PlayStation (PSN) akaụntụ na-echekwa na mmekọrịta gị onwe onye nkọwa nakwa dị ka-ahapụ gị ịzụ ahịa online ibudata egwuregwu, fim, music, na demos.
O nwere ike bụrụ na njehie kpatara n'ihi na ị gbara ọsọ iji malite ịgba egwu na njikwa ọhụrụ a zụtara na-enweghị nkwenye na akaụntụ PSN gị. Nyochaa na imelite ozi akaụntụ gị nwere ike inyere gị aka izere koodu njehie a ma nyere gị aka ịnweta akụkụ ụfọdụ nke netwọk ahụ.
Soro usoro ndị a iji melite ma nyochaa ozi akaụntụ PSN gị iji dozie esemokwu a.
Kwụpụ 1: Na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị na-emeghe igbe mbata email gị. Gbaa mbọ hụ na ị banyere n'otu adreesị ozi-e nke etinyere akaụntụ PSN gị.
Nzọụkwụ 2: Na igbe mbata gị, chọta ozi zitere site na PlayStation. Nwere ike ime nke a site na ịchọ ‘ Sony ’Ma ọ bụ‘ Egwuregwu ’N’ebe a na-achọ ihe.
Akwụkwọ ozi ahụ ga-arịọ nkwenye nke adreesị email gị, ime nke a, pịa pịa njikọ jikọtara na mail. Ozugbo ị kwadoro, ịkwesighi inweta njehie a ọzọ.
Mara: Ọ bụrụ na ogologo oge agafeela kemgbe e kere akaụntụ PSN gị mgbe ahụ njikọ ahụ nwere ike ịmebiela. N'okwu ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye Ebe nrụọrụ weebụ PlayStation ma rịọ njikọ ọhụrụ.
Okwu ndị dị na ihe nkesa nke PlayStation Network nwere ike ime ka onye ọrụ enweghị ike nyochaa akaụntụ ya. Mepụta na ịbanye na akaụntụ ọhụrụ ga-edozi njehie ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ka zụrụ ihe njikwa ọhụrụ, nke a agaghị abụ nnukwu ihe n'ihi na ị gaghị efunahụ ọ bụla ọganihu gị. Jide n'aka na inyochaa akaụntụ ọhụrụ ahụ n'oge na n'ụzọ ziri ezi tupu iji ya.
1. Bido PlayStation gi kpugharia onwe gi na mpaghara ‘Onye oru ohuru’. Pịa ‘ Mepụta Onye ọrụ ’Ma ọ bụ‘ Onye ọrụ 1 ’na ihuenyo PlayStation. Nke a ga - emepụta onye ọrụ mpaghara na PlayStation n'onwe ya ọ bụghị akaụntụ PSN.
2. Họrọ ‘ Osote 'Nke ozo' New na PlayStation Network? Mepụta akaụntụ'.
3. Ugbu a, pịa ' Debanye ugbu a '.
4. Site na ịpị bọtịnụ ‘Skip’ ị nwere ike gaa n’ihu igwu egwuregwu ahụ na offline. Cheta, site na ịgagharị na avatar gị na ihuenyo ụlọ nke njikwa gị, ị nwere ike ịdebanye aha maka PSN ma emechaa.
5. Gaa na profaịlụ nke Onye ọrụ 1 ma ọ bụrụ na ị na-eji PlayStation gị oge mbụ. Ga-abanye nkọwa gị n'ụzọ ziri ezi na eziokwu, pịa ' Osote ’Bọtịnụ na ihuenyo ọhụrụ ọ bụla.
6. Ewezuga ozi nkeonwe, ị ga-etinyekwa mmasị gị iji hazie ntọala akaụntụ gị. Ndị a gụnyere ịkekọrịta, izi ozi, na mmasị ndị enyi.
kọmputa na-ehi ụra mgbe 1 nkeji
7. Ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru 18, mgbe ahụ ị ga-ahapụ gị ka igwu egwu na ọnọdụ offline. Ichoro ikike n’aka onye okenye iji mee ka onyonu di n ’ntanetị. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịbanye ụbọchị ọmụmụ na-ezighi ezi iji nweta ọnọdụ ịntanetị ma ọ bụrụ na ị bụ obere ka ọ megidere usoro ojiji nke ngwaọrụ ahụ.
8. Ọ bụrụ na ị karịrị afọ 18, mgbe ị na-abanye usoro ịkwụ ụgwọ, adreesị etinyere kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ ejiri ya na ụgwọ kaadị gị. Nke a ga - egbochi njehie na nsogbu ịbịa.
9. Mgbe ị na-abanye adreesị email gị hụ na ọ bụ nke ịbanye, ka ị ga-enweta a nyocha nkwenye n'oge na-adịghị anya . Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta email site na otu egwuregwu PlayStation, lelee spam ma ọ bụ junk folda otu oge . Chọta ozi ahụ site na ịpị ‘Sony’ ma ọ bụ ‘PlayStation’ na ebe nchọta ihe. Soro njikọ ahụ iji mepụta ihe ọhụrụ NJ n'ịntanetị site na itinye aha mbụ na aha ikpeazụ gị. Cheta, aha ahụ ga-abụ ọhaneze na ndị ọzọ ga-ahụ ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta email ahụ, họrọ ' Enyemaka ’Ịgbanwe adreesị ozi ịntanetị gị ọzọ ma ọ bụ gwa PlayStation gị ka o degharịa akwụkwọ ozi ahụ. Họrọ ‘ Nbanye na Facebook 'Iji jikọọ PSN gị na akaụntụ Facebook gị.
Ọ bụrụ na ịmara onye nwekwara PlayStation 4 console, usoro a ga - enyere aka. Iji Idozi PlayStation njehie emeela, nwa oge banye na njikwa nke onye ọzọ. Nwere ike ịkekọrịta nkọwapụta akaụntụ ahụ na enyi ị tụkwasịrị obi wee gwa ha ka ha pụọ ​​nke ha ma banye na nke gị nwa oge.
Anyị na-akwado na ị nọ n'oge ahụ ma ị na-abanye na akaụntụ ahụ n'onwe gị n'ihi na nke a bụ ụzọ kachasị mma iji jide n'aka na ozi akaụntụ na paswọọdụ adịghị emebi. Mgbe obere oge, pụọ na akaụntụ gị site na njikwa ahụ wee banye na njikwa nke gị ma lelee ma ọ bụrụ na nke a edozi nsogbu ahụ.
Na-atụ aro: 7 tozọ Idozi PS4 (PlayStation 4) Oyi na Lagging
Ndị na-ejide akaụntụ nwere ike belata etu ndị ọrụ PlayStation Network ndị ọzọ si ahụ ha anya site na ịgbanwe ntọala nzuzo ha. Nke a bụ ihe ngwọta nye otu nsogbu ọzọ nsogbu niile mana ụfọdụ ndị ọrụ kọọrọ nke a nwere ike idozi nke gị ugbu a. Na-agbanwe ntọala nzuzo gị na ' Ọnweghị onye ọ bụla ’Kwesiri ogbugba dika nke a nwere ike idozi okwu a kpamkpam. Ntọala usoro mgbanwe a dị mfe ma dịkwa mfe.
1. Gbanye njikwa gị wee gaa n’onwe gị ‘ Ulo ’Menu. Kpatụ akara ngosi gia iji mepee 'Ntọala'.
2. N'otu oge na menu Ntọala, pịa 'PlayStation Network'. Na sub-menu pịa 'Akaụntụ Management' wee ' Ntọala Nzuzo ’. N'ebe a, ị nwere ike ịbanye paswọọdụ ID PlayStation gị.
3. Otu aka jiri aka họrọ atụmatụ ị ga-achọ ịgbanwe ntọala Nzuzo maka ya ma gbanwee ha ‘ Ọnweghị onye ọ bụla ’. Ọmụmaatụ, n'okpuru ‘ringkekọrịta Ahụmịhe Gị’ ị ga - ahụ ‘Ihe’ na Trophies ’nke ị ga-ahụ nhọrọ iji gbanwee ya n’ime‘ Ọnweghị onye ọ bụla ’. Otu ihe a bụ eziokwu maka 'Ijikọ na ndị enyi' n'okpuru nke ị nwere ike ịgbanwe ntọala na 'Ndị Enyi Enyi', 'Arịrịọ Ndị Enyi', 'Chọọ', na 'Ndị egwuregwu Players Nwere Ike ’mara'. Gaa n'ihu otu maka 'Ichebe Ozi Gị', 'Nhọrọ ozi', na 'Ijikwa Ndepụta Ndị Enyi gị'.
4. Ugbu a, laghachi na isi menu ma regharịa ihe egwuregwu PlayStation gị iji chọpụta ma ị nwere ike Idozi PlayStation Otu njehie emeela.
Ngalaba Aha System (DNS) na-eme dị ka akwụkwọ ndekọ aha maka ịntanetị. Anyị nwere ike ịnweta ozi dị n'ịntanetị site na aha ngalaba dị iche iche (dị ka ugbu a ị ga-eji 'troubleshooter.xyz'). Ihe nchọgharị weebụ na-emekọrịta na adreesị Internet Protocol (IP). DNS sụgharịrị ngalaba na adreesị IP ka ihe nchọgharị gị nwee ike ịnweta ịntanetị na ihe ntanetị ndị ọzọ.
Nginggbanwe na tweaking njikọ intaneti gị nwere ike ijide isi ihe na-ezere njehie a. Nke a ga- gbanwee adreesị DNS nke njikọ intaneti nke gị na adreesị DNS mepere emepe nke Google kpuchitere. Nke a nwere ike idozi esemokwu ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ, ọchụchọ Google dị mfe ga-enyere gị aka ịchọta adreesị DNS mepee.
Ọ bụrụ na ịnata njehie a mgbe ị na-anwa igwu egwuregwu gị na enweghị koodu njehie ọzọ na-esote ya, usoro edepụtara n'okpuru bụ ụzọ kachasị mma iji dozie esemokwu ahụ. Ọtụtụ ndị ọrụ achọtala ihe ngwọta a nyere aka na egwuregwu dị iche iche, ọkachasị na egwuregwu dịka Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
1. Ozugbo njehie ahụ gbapụtara na njikwa gị, kpughee onwe gị na menu Ntọala, ma chọta nhọrọ 'Akaụntụ Njikwa'. Pịa 'Banye' iji pụọ na akaụntụ gị.
2. Ugbu a, gbanyụọ kọntaktị PlayStation 4 kpamkpam.
3. Ozugbo emechiri ihe njikwa ahụ, site n'azụ ihe njikwa ahụ, kwụpụ eriri ọkụ ahụ nwayọ.
windo 10 na-ahapụ ịntanetị
4. Mee ka njikọ ahụ pụọ maka oge, nkeji 15 ga-eme aghụghọ ahụ. Ighachite eriri USB nke ọma n'ime PS4 ma gbanye ya.
5. Banye na akaụntụ gị ọzọ ozugbo ihe njikwa malitere ma lelee iji hụ ma ị nwere ike Idozi PlayStation Otu njehie emeela.
Ndị ọrụ ole na ole ekwuola na ịgbanyụ na ịmegharị usoro nkwenye nkwenye abụọ ahụ dị ka azịza zuru oke ma dị mfe. Ọ bụrụ na agbanyeghị ya ugbua, mgbe ahụ ka ị nwee ike ịme nhọrọ ahụ.
Usoro nyocha nkwenye nke 2 na-echebe onye ọrụ ahụ site na ntinye achọghị site na ijide n'aka na naanị ị nwere ike ịnweta akaụntụ gị na Network PlayStation. Ihu ọma, mgbe ọ bụla achọpụtara nbanye ọhụrụ na sistemụ gị, ị ga-enweta ozi ederede na koodu nkwenye nke a ga-abanye ka ị na-agbalị ịbanye.
Ọzọkwa Gụọ: Etu esi ebufe Microsoft Office na Kọmputa Ọhụrụ?
Usoro ịgbanwe ọnọdụ nkwenye 2-Nzọụkwụ dị mfe, naanị soro usoro ahụ edepụtara n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Gaa na ‘ Njikwa Akaụntụ ’Nhọrọ na Ntọala menu. Pịa na 'Ozi Akaụntụ' wee 'Nche' na sub-menu. Ọ bụrụ na enyerela ya aka, wee pịa nhọrọ ‘Ọnọdụ’, na menu ndọpụta, họrọ ‘Adịghị arụ’ wee ‘Kwenye’. Malitegharịa ekwentị ahụ ma gbanye ya ọzọ.
Kwụpụ 2: Jiri ozi akaụntụ gị wee banye (ọ bụrụ na ịnweghị). Chọta ' Melite ugbu a ’Bọtịnụ dị n'okpuru‘ 2-Nzọụkwụ Nyocha ’ma pịa ya.
Nzọụkwụ 3: Na igbe dị mma, tinye nọmba mkpanaka gị nke ọma wee pịa ‘ Tinye ’. Ozugbo agbakwunyere nọmba gị, ị ga-enweta koodu nkwenye na ekwentị gị. Tinye koodu a na ihuenyo PS4 gị.
Nzọụkwụ 4: Na-esote, ị ga-aka nke akaụntụ gị ma na-a na nkwenye na ihuenyo. Gụọ ozi dị na ihuenyo ma mee ka ịga n'ihu. Wee, pịa 'Ọ DỊ MMA' .
atụmatụ melite na windo 10 version 1709 not installing
netwọk mpaghara adịghị enwe nhazi ip ziri ezi
office 2016 nyocha anaghi aru oru
chromecast ọkwọ ụgbọala maka windo 10
windo 10 ngwa agaghị emeghe 2019
echefuru WiFi paswọọdụ windo 10
na-eche nbudata google play